Farmaajo Oo iclaamiyey Shir deg deg ah oo lagu qabanayo Dhuusa-Mareeb & Fadhi baarlamaan.
January 30, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 29
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iclamiyey kulan ay iskugu imaanayaan madaxda dawlad gobaleedyada dalka iyo kuwa dawladda Faderaalka, kaas oo loga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka, gaar ahaana dhacdooyinkii u dambeyeey.
Qoraalka Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in Madaxweynuhu tixgaliyey xaaladda siyaasadeed iyo mida Amni ee dalka, iyo baahida loo qabo in la gudagalo qabsoomida doorashadii ay horey ugu heshiiyen dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya.
Mar kale ayaa beesha caalamku gacanta maroojisay! U sharaf badnaan lahaydaa isagoo Soomaali la hadla iyadoon la dhexgalin!
Caqlixumadiisa waxaa ka mid ah inuu isku dayo inuu baddelo magaca taariikhiga ah ee ‘Dhuusamareeb’! Ma waxay la tahay inuu ka caqli badan yahay Soomaalidii hore iyo tan maanta? Anigu waqti hore oo fog waxaan maqlay in dhuusamareeb Afka Oromada lagu yiraahdo geedka mareerka. Magaalooyin badan oo dhulka Soomaalida ah ayaa magacoodu kasoo jeedaa Oromo: Caabudwaaq, Gaalla-kacayo, Ceelwaaq…..
Xitaa Hargeysa dadka qaar waxay yiraahdaan waa Harargeysa (waddadii Harar tagaysay); qaarna waxay yiraahdaan hargeysa Afka Oromada waa geedka dacarta.
Labada aqal ee Baarlamaanku maxay ka shirayaan? Waqtigoodii wuu dhacay, wixii ay ka shiraan iyo wixii ay soo saaraanba waa wax-kama-jiraan. Mise Farmaajo ayaa awood u leh inuu waqtiga u dheereeyo? Ma laga yaabaa inuu ka fakerayo inay isaga waqtiga u dheereeyaan? Immisa milyan oo dollarkii Qatar ayaa diyaarsan? Wax walba filo.
A.Arar kkkk SX Mucaaradnimo ma ahan taadu waa iska isir nacayb iyo shaqsi nacayb.
Ninkii Farmaajo hadduu ila soo hadlay waa la maquuniyay oo waxaa lagu yiri 4 sanno banaanka ayaad keenstay ee fowdo ayaan kugu kicinaynaa.
Sharci yaqaan in aad tahay maba ogown.Caku reer mudug MJ waa un MJ maba daahirtaan.War haddii waxa ay sheegaan aanay soconayn maxay kuraasta u kululaynayaan?
Waqtigii Xasan imisa ayay sii joogeen goaano soo saarayeen?Wax kastaa oo dib u dhac ah dalkaan waxaa sabab u ah kan ku faana inuu Somaliya cadow ku yahay,jaajuusnimo ku faana.
5 Million ayaa Dani calooleey loo balan qaaday waadna ogaan doontaa markaa ayaad dhihi doontaa war ninkii Hanuuniye ii doona.
Ta kale arrinkiinu kaftan wuu dhaafay XAASIDNIMO CADOWTOOYO ayuu gaaray.Wali idinkama hayo adiga iyo A.A Xade tacsi shacabkii aad ku layseen doqonka Janan.
Dagaalkii wuxuu marayaa in dad wada handcup ah aad from Garawe to B.Xawwo usoo xawisheen.Odayaashii wafdigii DF la kulamay waxaa loo sheegay in arrinta Gedo laga hadlayo Deni kkkkk markaasaa waagu ku baryay.
Wax walbaaba wey kasuurtoobaan Farmaajo iyo Fahad. Baarlamaanka wakhtigiisu dhacay mudo korodhsi ayuu u fadhiisinayaa. Shirkana waxa uu ka odhanayaa doorashadii aynu gudo galno, wakhtiga ay socotana waan kordhisanayaa. Wax kaloo meeshaas kasoo naasocadi ma jiraan.
Haduu dadka Reer Muqdisho 13 xildhibaan baad ku aamusiisay isleeyahay, tollow Gedo ka tanaasuli maayo oo weynu garaneynaaye, Axmed Madoobe muxuu ku qancin?
Dhanka kale maxaad Oromada Ajandeheeda Dhulka Soomaalida ay u degtey u buunbuunineysaa? Magacyadaad soo wada sheegtey oo dhami waa AfSoomaali. Dhuusamareeb, Gaalkacayo, Caabud Waaq, Ceel Waaq iyo Hargeysiba. Aan iska kaftamee Dhuusamareeb digirtey xoog ugu dheereysaa. Kkkkk Gaalkacayo anigu sidey ku baxdey garan maayo, laakiin CaabudWaaq waa Bartii ama Goobtii Rabi ama Waaq lagu caabudi jirey, Ceel Waaqna waa Ceelkii Illaahay. Kelmada Waaq weynu wada garanaynaa oo waa Rabi ama Allaah. Hargeysana waa Hargo Geys. Waxey aheyd tuulo yar oo ay dadku hargaha geynjireen.
Afafka ay Soomaalida iyo Oromadu ku hadlaan kelmado badan ayay iskaga mid yihiin. Meelona dhaqankeenaa iska yara shabaha. Islaamna weynu wada nahay. Laakiinse damacooda ayaa weligeedba ahaa iney Dhulkeena sheegtaan. Qiso kasta iyo qiilkasta oo ay u sameysan karaan ayay u sameysteen. Maaha ineynu inaguna damacaas mucangaga ah u shaabadeyno.
Qabqable dagaal farmaajo faasiq yaa Somalia ka qabta? kan 4 sanno wuxuu ku dhameystay dagaal iyo inuu tolkiisa meelaha muhiimka u dhiibo iyo riyo maalmeed asagoo raba sidii adeerkiisa siyaad barre inuu dalka xoog ku heysto,asagoo tangi shisheeyo 1 kiilomitir oo ay heystaan lagu ilaaliyo, war yaa yiraahda ka joog adiga ma ahane.
Ini fargaajo iyo canaasiirta jifaajiriqda Daaroodka oo hada somaliya looga yaqaan AYAXA waaba ku beryay waana quus gooyay. HANUUNIYE inangumeed waxaan leeyahay ragii daaman hagarlow ilmada diliqleh kaa keenay dacsi niman lasaariyo kawayn duul qabiilo ahe ka difaactan soomaaliyoo duuban baanahaye.MJ waa yaqaaniin sida canaasiirta loo bahdilo laakiin waa gob oo kama aarsadaan kuwa ku hoos nool loo mararka qaar sidii jinicii u qan qaniinaan. Ini fargaajo qoolk eeyga ayaa qoorta loogu xiray isagoo bahdilin oo dulaysan ayuu galbaday. Waxaan oranlahaa canaasiirta Daarood toobadu waa idiin furantahay 8 February ka hor, hadii kale culaabtooda ha urursadeen.
@Ahmed Shiine iyo A.Arar
Arrinta Oramada waxaa wanaagsan in Soomaali dhan ka hadasho ma aha hal qabiil siiba Daarood ka hadlo. Waxaan saas u leeyahay Daarood si fiican uma yaqaan qabiilada Soomaalida ee Daaroodka ahayn. Soomaalida aad iyo aad ayeey ugu fac weyn yahiin Daaroodka midda kale Daarood xad lama laha Oromada ee Soomaalida kale ayaa Oromada xad la leh marka jaahilnimada Daaroodka ayaa waxaa dhacday in qabiiladi Soomaalida ahayd eey yiraahdaan waa Oromo.
Dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia markii la sameynaayay waxaa Soomaalida loo gooyay badanaa inta Daaroodka deggana intii kale Soomaalida aan Daarood ka ahayn oo ahaa Hawiye iyo Dir lagu daraay dhulkii Oromada.
Marka waxaa is weydiin ah jaahilmimada Daaroodka ma meeshaas meey gaartay mise ula jeedo kale ayaa ka dambeysa. Dhulkii Hawaash oo Hawiyaha degganaa waxaa lagu daray Oromia, magaaladii Baabila oo wax yar u jirta Harar oo deegaan u ahay Karinle Hawiye waxaa lagu daray Oromia. Sidee ku dhacday arrintaas??
Waxaad moodaa Daarood magaca Samaale in uu sas ka qabo oo xataa si cad u inkiraan. Soomaali waaa Sab iyo Samaale. Waa dhif shaqsi Daarood oo aqoon u leh qabiilada Samaale.
Axmed Shiine waxaad tiri Gaalkacyo ma garanaayo marka aan wax kula socosiiyo.
Gaalkacyo waa af Soomaali. Af Soomaali oo wali eey ku hadlaan reer Hiiraan ayaa ah ereyga Gaal loo yaqaan Geel
Gaalkacyo waa Geel kacyo
Gaaljecel waa Geel jecel
Abgaal waa Ab Geel
Xerogaal waa xero geel
Haruubgaal waa haruub geel
Midda kale aad tiri Waaq waa Allah waa qalad
Allah waxuu leeyahay 99 magac Waaq kuma jiro marka ma dhihi karno waa Allaah
Laakiin mid waad ku sax santahay Waaq waxaa la dhihi jiray waxa Ilaahay oo kale u caabudi jireen inta eey diinta Islaamka imaanin.
Caabudwaaq waa cabadudaada Waaq
Ceelwaaq waa ceelkii Waaq
Waaq waa waxii la caabudi jiray diinta Islaamka ka hor
Laakiin Soomaalida waxeey timid oo Diinta islaamka ka dib
Sab iyo Samaale waaxeey ka yimaadeen faracii Asxaabtii Abisiiniya timid siida Aqiil Abu Taalib
Marka Soomaalida waxeey timid oo faraceeda bilawday dinta Islaamka ka dib.
Dadka Waaq caabudi jiray waa dadkii Kushiitigii dhulka hadda la yiraah Soomaaliya oo degganaan jiray.
Soomaalida waxaa abti u ah dadka dhulkaan degganaan jiray ee Kushiitiga
Wax yaalaha aan la yaabay oo Daaroodka haysto waxaa ka mid ah:
Iska daa dhulkaas Dowolad Deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Wallah waxaan arkay oo aan la kulmay dad Daarood ah si cad u diidan taariikhdii “Ajuuraan the Somali Islaami Dynisty”. Taariikhdaas oo socotay 300 sano oo buugaagta adduunka looga hadlaayo oo waliba baal dahab ah ka gashay taariikhda Afrikada Madow oo ah in eey tahay maamulkii ugu horeeyay Afrika oo reer Yurub kula dagaalamay Maraakiib badda dhexdeeda.
Shaqsiga Daaroodka ah waxuu ku celceliyaa waxaan nahay dadkii ugu horeysay oo Afrika oo dayuurad reer Yurub u soo qaateen hadii aad tiraahdi haa waxaan kale nahay dadkii ugu horeeyay oo Afrika oo maaraakiib reer Yurub kula dagaalanay wuu aamusaa intuu farxi lahaa waxaad u moodaa in eey geeri dhacday oo uu tacsi ku jiro.
Marka waxaad moodaa iska daa in aan qabiil qabiil ku dirirnay ee waxaa socdo in taariikhdii xataa qabiil qabiil laga dhigaayo marka Soomaaliya waxay ku socotaa in eey in Daarood ama Soomaalida inteeda kale mid baaba’o oo mid laga takhluuso hadii aan sidaan laga leexan.
SICIID DENI IYO INTII LA SOCOTAY WAA LA QUUSIYEY. DHAA DHAA DHAA BAA KASOO HARTAY. MEESHA HADAL BAY AWALBA KU HAYEEN- CARRAB DAALAN, XIGMAD LA AAN, IYO QUURIWAA BAY KUSOO IDLAADEEN.
Oromo way ogtahay in Soomaali dhulka riixday, Soomaalina waa ogtahay inay Oromo riixday. Awoowgay wuxuu iiga sheekeeyey sheekooyinkii uu ka dhaxlay awooweyaashiis iyo sidii gaalo-madowda (Gaallaha) loola dagaallami jirey ee dagaalka maalinba qabiil gali jirey.
Gaalkacyo — sida jiilalkii hore noo soo gudbiyeen waa Gaalla-kacyo (meeshii Gaalluhu ka kacay). Ilaa xilligii gumeysiga magaca Gaalkacyo waxaa loo qori jirey ‘Gallacaio’. Gaalla qabiil waa Oromo ah. Erayga gaal (kaafir) halkaas ayuu ka yimid.
Adiga dhibta ku haysata waxaa weeye qofkii wax ka sheega Farmaajo waxaad u turjumanaysaa in Mareexaan la neceb yahay. War Farmaajo waa shakhsi aan xikmad ku shaqaynayn. Nasiibdarradu waxaa weeye intiinna indhola’aanta ku taageersan, waxaad moog tihiin sida dhaqanka Farmaajo usoo nooleeyey xusuustii xukuumaddii Kacaanka oo lasii illoobayey lagana soo bogsoonayey.
Haddii aad doonaysaan in Daaroodnimo la idin ku taageero, la imaada qof macquul ah oo Daarood aan asxaan gaar ah u sameyn laakiin aan ka duudsiyin wixii ay soddonka sano Soomaali kula gorgortamayeen ee kula heshiiyeen. Farmaajo waa doqon sokeeye; Soomaalidu waxay tiraahdaa, ‘Doqonta tolkaa waa la luggooyaa, tan shisheeyahana waa la kalkaalaa, markaasay goob kasta kugu ammaanaysaa.’
Inta aadan Oromo ka hadlin waxaad soo barataa Qabiilada SAB IYO SAMAALE
KKKKKKK I like this
“‘Doqonta tolkaa waa la luggooyaa, tan shisheeyahana waa la kalkaalaa, markaasay goob kasta kugu ammaanaysaa.’
Farmaajo doqomadii Hawiye ayuu kaalkaaliyaa markaas meel kasto ku ammaanaan. KKKKKKKKKKKKKKK
Laakiin asagaa is iloobay oo ah doqon Daarood KKKKKKKKKKKKK Daaroodkina wey lugooyeen. KKKKKKK
In badan baan sheegay in halkan ay soo galaan dad Oromo ah oo af-Soomaali bartay, tuhmanihii ugu horreeyeyna hadduu is caddeeyey; waligay iyo WAAQAY tan oo kale ma arag, Soomaali dhulkeedii Oromo lagu shaanbadaynayo! Niicdii Oromaday meesha la yimaaddeen; ordoo Kismaanyana siiya Kikuyada illeen iyagaa sheegtee.
Haddaan u soo noqdo, isaga oo wax badan xeerinaya sidii caadada u ahaydba, wuu ku mahadsanyahay in madaxweynaha qaranku uu shir isugu yeero maamul-BEELEEDYADA & gobolka Banaadir. Samareebna waa meel ku habboon in shirka lagu qabto, oo aan Xamar niiko lala soo doonan, waayo iyada ayaa bud dhige u ahayd heshiiskii 17 September ee Xamar lagu gaaray; geelii la soo uruuriyey weli waa xaraysanyahay. Waxa aannuna rajeyneynaa in guul iyo is afgarad laga gaaro INSHA ALLAH.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Guul iyo Gobonimo, Soomaaliya wuxuu ka soo saaray God Dheer oo mugdi ah islamarkaana ay ku rideen wax magarato Horgalayaal u ah Dowlado aan marnaba dooneyn iney yeelato Dowladnimo Micna leh.
Taariikhdu waa qoran tahay,waana Qormeysaa Haddii Qaar Soomaalida ka ah la ciisheysan Qabyaalad ka daran Coronavirus, xaaladda waddanka iyo Marxaladaha uu soo maray waqtigii Burburka ilaa hadda waxaa jira Dadyow Dunina ku nool kagana Aqoon badan kagana Run sheeg badan Shaqsiyaad kooban Soomaali Qabyaalad la Ciisheysan.
Soomaalidu waxaay tiraahdaa Xaglo Geel wax Gutin la geliyo ka weyn,sidoo kalena Soomaalidu waxaay tiraahdaa Qorax soo baxday cidna Sacabbo kuma qarin karto.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xagxagasho waxba kama qaadeysaan,Soomaalioo dhan baa dooratay,insha Allah mar labaad dooran doona,waayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ka Shaqsiyaad duwan yahay kuwa sheegta iney han Siyaadadeed leeyihiin waayo waa kuwo ku soo fashilmay Siyaasadda Soomaaliya, qaarkood waaba dambiilayaal mudan in Sharciga la horkeeno waayo Cidna Sharciga kama Sarreyso( No body above the law)
Shaqsiyaaddu waa cajiib ah islamarkaana aad iyo aad u Qurux badan Iyadaana kala saarta Dadka,kalana Sareysiisa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad bay sarreysaa Shaqsiyaaddiisu waana Hoggaamiye leh Astaamaha looga baahan yahay Hoggaamiye waddan ( Christmatic Leadership)
Caqliga madaxda PUNTLAND iyo kuwa ku aragtidaa xataa Axmed Madoobe wax uma ogola, waana muuqataa in aragtidooda ay Soomaaliya ka sii dhimaneyso.
Ini fargaajo waa firxanayaa naf baday ayaana ku jirta albaabadii oo dhami way kasoo xirmeen marka laga reebo kuwa naarta. Rag rag dhalay ayaa helay
@ Ali Farah Puntland maxay Axmed madoobe uga baahantahay? Puntland waxay doonaysaa dal ku socda sharci iyo nidaam dowladalnimo oo aysan koox qowlaysato ah afduubin taladiisa burbur iyo balaayana dhaxalsiin. Puntland iyadaa loo bahanyahay ee iyadu cidna uma baahna. Warkeeduna waa cadyahay. Calaacal ka iyo tola adaydu ini fargaajo waxba u tarimayso Puntland na waligeed ayadaa guusha leh waayo waa maskaxda dalkan hogaamisa.
Haddii aad wax sheegayso wax macquul ah baa la sheegaa. Taariikhda Soomaalida wixii gumeysiga ka horreeyey waa mid afka la isugu soo gudbiyey oo jiilba jiil ka dhaxlay. Wixii aad awooweyaashaa ka dhaxashay inaad sheegto xaq baad u leedahay laakiin ha abuurin sheeko bug ah iyo qardajeex.
Waxaad tiri Daarood Samaale ma yaqaan! Oo yaa Daarood yaa dhalay? Mase aragtay meel aan Irir iyo Daarood deris ku ahayn oo wada degganayn? Mise Samaale waa Ya’juuj wa Ma’juujkii uu derbiga ku gudbay Dulqarnayn? Wax Samaale la yiraahdo majiro. Ujeeddadaadu waa inaad tiraahdo Oromo waa Irir; kuwo sidaas shir u qabtay oo ku doodayana waaban daawaday. Waxay ku bilaabatay Dir, kadibna Irir, haddana waxay maraysaa Samaale! Horta, maxaa jinni iyo xaab-qaadka kuugu wacan? Ma dad la’aan baa ku haysa?
Waxaad tiri majirto meel Daarood iyo Oromo deris ka yihiin? Marka, laga soo bilaabo Jigjiga ilaa NFD — Daaroodka iyo Oromada Irirbaa u dhexeeya miyaa? Waxaa halka ka muuqata aqoondarrada kaa haysa degaannada DDS iyo NFD.
Degaanka Hawiyaha ee ka shisheeya degaanka Ciisaha ee Itoobiya, aniga waxaa igu maqaale ah in iyagu diideen in lagu daro DDS oo ay doorteen gobolka Oromada, kadibna Oromadii ku bilowday dil iyo barakicin.
Ujuuraan cid inkirtay taariikhdooda majirto. Goormaase Ujuuraan Irir noqday? Waxaa la sheegaa in boqortooyadii Ujuuraan uu riday Hawiye, marka kuwii riday baa taariikhdooda burburiyey. Dad badan waxay qabaan in Ujuuraan yahay qowmiyad Soomaalida ka facweyn, dhulkana uga soo horreeysay. Ceelasha biyaha laga cabbo ee ku yaal Soomaaliya, Soomaalidu waxay aammisan yihiin in Ujuuraan qoday.
Haddii Ujuuraan lagula dagaallamay ‘maraakiib dagaal’, ma waxaa siman markab shiraac ku socda oo uu saaran yahay askari ridaya qori shucays ah, iyo raga lagu duqeeyey diyaarad ridaysa bombooyin iyo qori boobe culus (heavy machinegun) ah?
Reer Mudug waa yaqaannaan: xerogaal, haruubgaal iwm. Gaalkacyo ma aha xero geel ka kacay ee waa meeshii ‘Gaalla’ kacay amase laga kiciyey; dadka dhulkaa deggan ayaa taariikhdiisa kaaga aqoon badan.
Degaannada DDS waxaa qaarkood u jiraan xadka Somalia 1000km. Anigu taan ogahay waa in dadka Daaroodku laga soo bilaabo galbeedka Jigjiga ilaa xadka Tana River District ( Kenya) ay ku tageen dagaal qarniyaal socday — ama Oromo ha ka kiciyeen ama ‘Samaale’.
Waxii aan soo qoray oo aan ka hadlaayey ayaad caddeysay oo igu raacday.
Waxaan dhahay Daarood badankiisa Samaale ma yaqaaniin. Adigana waxaad soo qortay “Wax Samaale la yiraadho ma jiro”. KKKKKKKK
Marka waxaa is weydiin ah maxaad u diideysaa jiritaanka Samaale? Ma adigaa korka lagaa saaray oo lagu yiri waxaad ka soo jeedaa Samaale? Maya
Ma magaca Samaale ayaa wax xun ah? Maya
Ma magaca Samaale ayaa magac Gaal ah? Maya
War Hawiye waad ogoshahay, Dir waad ogoshahay, Irir waad ogoshahay. Maxaad jiritaanka Samaale u diidantahay? Cajiib
Ma Samaale ayaa aabahaa dilay? Maya
Ma Samaale ayaa awoowgaa dilay? Maya
Ma magaca Samaale ayaa korka lagaa saaray? Maya
War maxaad u diidantahay magaca Samaale jiritaankiisa? Cajiib
Waan ogahay waxaad u diidantahay Samaale oo wallaahi kaligaa ma aha dad badan oo Daarood ayaa fikirkaas kula qabo.
Samaale oo meesha uu magaca Soomaali ka soo jeedo Daaroodna uma dhallanin Soomaali. Daarood ma aha dhalasho ahaan Soomaali.
Waxaad i weydiisay “Daarood yaa dhalay?” Anigu Daarood waxa dhalay sheekooyin badan ayaa ku maqlay marka maadaama adiga aad reerkaas ka soo jeedid noo sheeg.
Daarood yaa dhalay?
Ajuuraan Dynasty waa Boqortooyo fac wayn cid dabooli ama qarin Kartaana aysan jirin. Ajuuraan waa niman Hawiye ah. Magaca Ajuuraan Waxaa uu macnihiisa yahay Canshuur Qaadayaashii mida kale Ajuuraan Hawiye lama dagaalamin ee waxaa la dagaalay Reerka Hiraab !!!
Hhhhhhh, Farmaajo ciyaal fay-cali iyo mooryantisa wey fashilmeyn waxaa lagu qasbey inuu qabto shir awal Puntland iyo Jubbaland ayaa waxeey ku dhaheen shir qabo wuu diidey ileyn waa gun hhh hada waxaa lagu qasbey inuu shir qabto xoog ah BEESHA CAALAMKANA WEY imaneysaa dhuuso-mareeb xarunta mooryanta abniga deni iyo madoobe waxaa sugaya ciidamo isugu jira AMISOM iyo kuwa Puntland iyo Jubbaland. Farmaajo xaare wuu ku fashilmey siyaasada gudaha iyo dibada lagama yaabo inuu soo noqdo haduu soo noqdana SOMALIA waxaa ka bilaabanaya dagaal sokeeye. ARINTA GEDO waa faanoole fari kama qodna farmaajo ciyaal fay-cali iyo mooryantisa haramcad iyo gorgor lagama yaabo iney sii joogan gedo waayo dadka deeganka badankood waxeey go’aan sadeen iney xoreystaan deegankooda NINKII DHOOF KU YIMID AYEY GEERIDU DHIBEYSAA dagaalka gedo haduu bilow yahay. Farmaajo xaare ciyaal fay-cali wuu FASHILMEY xitaa international community inuu soo noqdo marabaan waayo soo noqoshadisa waxeey sababi kartaa dagaal sokeeye wada shaqeyn la”aan maamul goboleedka dalka qaar.
Hhhhhh, SAMAALE kan la baxey bal inaad tahay inan GUMEED… Wax samaale la yiraah majiraan waxeey ahaayeen koox GANG ama tuuga ah xitaa OROMO IYO BURAAGE ayaa ku jitey. Hhhhhh magaca samaale mashruuciso wuu dhamaadey
Waryahee maxaad dadka u maageysaa? Waxaa ina gumeed ah qofka aabihiis sheegin ee adiga waayo aabaha oo yaa ku dhalay?
Ninkaas waxuu yiri waxaan ahay ina Samaale ee adiga ma waceyl ayaad tahay?
Reerka Daarood waxa ay leeyihiin dhaqamada lagu yaqaan Minority ( Dadka laga tira badan yahay). Hadaba maxaa lagu gartaa dadka ay Tiradoodu yar tahay?
Waxay leeyihiin calaamadu u gooni ah oo lagu garto.
1) Hadii for example qof uu wax ka sheego Daarood ayagoo idil baa Wada jawaabaya yar iyo wayn ba.
2) Qabyaalada oo aad ugu Wayn tahay dhankooda
3) Waxay isku dhereriyaan oo ay iska dhigaan in ay la siman yihiin Qabiilada Hawiye iyo Isaaq.
4) Daarood ku waa Dawlad ku nool jecel in ay boobaan hantida Qaranka Ummada Somaliyeed.
5) Waa qabiil aan aqoon wax la yiraahdo isu tanaasul dhexdooda ah iyo guud.
6) Waa qaswadayaal aan awood lahayn wadankana caddaw kusoo Hogaamiya sida Kenya iyo Ethiopia.
Diiwaanka ku qora.
War waxaa mowduuco ahaa,madaxwaynaha Soomaaliya mudane,
Maxaned Cabdullahi Maxamed ( Farmaajo)
oo soo jeediyey in shir la isogo yimaado magaalada Samareeb ( ex dhuusamareeb)
War waxa raga inta badan ay ra’yi ahaan u soo qoreen,waa wax aan inaba aan meesha soo geli karin.
War qabiilkaan aad ku waalateen,wax micna ah oo uu ku fadhiyo
Taariikh ahaan ,waa mujtamacyo ama ( Society) iso yimo,baahi jirtay iso keentay,dunida ka dib arintaasi waa ka gudubtay oo qowmiyad iyo qaranimo ay u gudubtay.
War qarnigan DNA ah baad weli reer iyo beel baad Soomaalidii u kala qaybinsysaan,war wax ku mashquulo,aan fadhi ku dirir ahayn. Soomaalida yaan la kala qaybin,yeesan indin la tegen. Qabyaalada Jaahiliga ah ee dunida inta badani waa hore ka gudubtay.
Dooda aan ka qeyb galo!
@@@ SALAALE & A. ARAR.
Aan ku hor maro dooda Samaale ee ah, Daarood Samaale ma yaqaan iyo Magaca Soomaaliya ayaa ka Soo jeeda. Iyo tan ugu dambeeysa ee ah, AJUURAAN waa Hawiye!
Marka ugu horreeysa, SAMAALE iyo IRIRKA wuu dhalay la yiri midna qabiil Jira ma ahan ee waa Magacyo la sameeyey oo laga lahaa, dano Gaashaan buurnimo, Sida ururka “NATO” oo kale, dad baase run mooday! Kkkk
Oo tusaale ahaan, magaca IRIR oo ina SAMAALE loogu ab tiriyey waxaa 60 aadkii sameeyey rag caan ah, Allaha u naxariistee way dhinteene. Kuwaa oo kala ahaa. Cali Jimcaale (Xawaadle) iyo Cigaal (Iidoor) oo ugu talo galay, is Gaashaan buureeysi Daarood looga hor tago!
Haddiise uu jiro Oday la yiraagdo SAMAALE dhalay Duqii kale ee IRIR ahaa aawaye dadkiisii kale?
Maxaase IIDOOR oo sheegta sida DAAROODKA in uu Carab kayimid, uu ugu digo rogtay in uu yahay ina IRIR SAMAALE?!!! KKK
Magaca Somaaliya ma duq SAMAALE la yiraahdo oo ah sida uu yiri A. Arar, wax shabbaha JUUJ iyo WA MAA JUUJ ayuu ka soo jeedaa?! Maya, oo dadka qaar waxaay sheegaan in uu magaca Soomaaliya ka soo jeedo labo eray oo la isu geeyey, Hasha ama Saca “SOO-MAAL” ama Soo-lis. Kaasi oo noqday, SOOMAAL, Tan ayaana ugu dhaw micnaha iyo habka erayada.
Tan ah AJUURAAN waa HAWIYE iyada Taariikha mid tagtey iyo mid joogtaba waay diiday!
Oo tusaale ahaan, waxaa Soomaaliya soo maray, magac Gaashaan Buur ahaa oo aay dadka Soomaaliyeed ku midoobeen oo ahaa, (AJI). Kaas ooy ku midoobeen dadka Soomaalida aha soda, Hawiye, dir iyo Daarood, cidda loo sameeysteyna waxaay ahayd AjUURAAN oo iyaga u dhigmay. Magacaa oo illaa iyo maanta aay istiaalaan, dadka waaweyn ee ku nool, Jubaland, NFD iyo Gobolka Liibaan ee Itoobiya.
Taariikhda cusubna labo Sababood oo hadderba muuqda ayaa diiday in uu Ajuuraan yahay Hawiye.
1- Wac qaybsiga Soomaalida ee 4,5 ah, Ajuuraan D&M ayuu ku qayb qaataa,oo taasi waay diiday.
2- Ajuuraan afka aay ku hadlaan ma ahan Af Soomaali May iyo Maxaa tiri toona oo Af aad u adag oo Afka Oromada
Shabbaha ayuu Ajuuraan ku hadlaa ee qofkii caddeyntaa rabo, ha tago, deegaanka Wajeer MFD oo uu dadka Ajuuraan ee radmiga ah ku dhaqan yahay miyi iyo magaalaba, iyagoo Ogaadeenka xulufeysta, Dagoodiga oo Hawiye ahna aanan arki katin. Taasina waay diiday.
Tan ugu dambeeysa iyo erayga GAALLA=GAAL
GAALLA waa Qabiilka Oromada magac aay waarkood isticmaalaan illaa iyo maanta. Sida, dadka Wardeeyda la yiraahdo ee ku dhaqan, Gobolka TANA ee Kenya ee Gaarissa deriska la ah, oo iyaga ayaa isu yaqaana GAALLA, Kenyana waay ugu yeertaa.
Magaca Gaal Soomaalida halkaa ayaay ka keentay. Laakiin waxaa jira in uu Afka Maayga Geela ugu yeero Gaal.
Tusaale ahaan, qofka Raxanweynka ah marka uu ku weeydiinayo Caano Geel wuxuu leeyahay. Aw Wan GAAL FADEEY? Wan=caano.
Waana meesha uu kayimid magaca Gaal-jecel,waana af Raxanweyn!
Allow ma u sharaxay, wax aaysan aqoon ku muruntada?! Kkk
Ajuuraan waa Hawiye waana Jambeelle Hawiye. Boqortooyadii Ajuuraan waxaa jabiyey Hiraab waana taariiq qoran Daarood na waxba laga Waydiin maayo Ajuuraan Dynasty.
Daarood taariiq malaha waxaana taariiq ay ka dhigtaan Wadaadkii Waalnaa ee Ogaadeen. Kaas uun bay buun buuniyaan shuftada ahaa.
@@@ Ducaale Kaahiye!
Waxaan qiyaasayaa in aad tahay, nin Hargidir oo Sacad ka ah. Marka, inta aadan ku mashquulin Hawiyeeysiinta Ajuuraan oo ah qabiil dadka Soomaaliyeedba ka fac weyn, meel ma uga cariirin kartaa odaygii Sacad ahaa meel uu ka soo galo abtirka duqii Madarkicis ahaa?! Kkkk
4tan halqabsi ee aay 4ta jifo ee Habargidir leedahayse maxaa kaaga baxay?!
Taas oo ah. Afarta jifo oo Habargidir ayaa loo soo jeediyey in aay 4tan arrimood la joojiyo. Kuwaas oo kala ah.
1- In beerashada Digirta la joojiyo, si aanan Habargidir loogu caayin.
2- In Sadaqada xoolaha laga bixiyo.
3- in Hadalka badan la iska daayo.
4 Iyo in uu Abtirsado qoys kasta oo 4ta Habargidir kamid ah.
1aad, SARUUR ayaa shirkii ka kacay oo yiri, haddiiba beero falo loo soo dhigtey, shirka waan ka baxay! KkK
2aad, SALEEBAAN ayaa istaagay oo yiri, haddiiba xoolihii loo soo dhigtey, shirka waan ka baxay! Baqeylnimo! Kkk
3aad, CEYR ayaa daba dhabaan dhawday oo yiri, anigu ma aamusi karee, haddiiba afka la is qabanayo, shirkii waan ka baxay! Kk
4aad, Odaygii SACAD ahaa ayaa shirkii ka kacay oo yiri, haddiiba abtir iyo in la is qodqodo loo soo dhigtay, kuma jiro! Kkk
Halkaa Waxaa ka muuqato in qolo waliba lagu calaamadeeyey, boogtii aay lahayd. Mid baase la hubaa, taas oo ah.
In aay duqii Madarkis ahaa ula timid wiilkii Sacad ahaa iyadoo wadadto, gabar Ogaadeen ah kana ahayd, Makaahiil/reer Sacad. Taas oo wiilkeeda u bixisay magaca qabiilkeeda ee ahaa Reer Sacad!
Arrintaa oo kentay in aay Ogaadeen illaa iyo maanta sheegaan, in uu Sacad yahay Ogaadeen. Taas oo aay xitaa Sayidkii Gabaygiisa mar ku jirtey.
Sacad waa Ogaadeen haddii Odayo loo raaco!
Waana Ina Makaahiil haddii loo Abtiriyaaye!
Marka, Oday Kaahiye, inta aadan Ajuuraan oo aanan xitaa af Soomaali ku hadlin Hawiye oo uu ka fac weynyahay ku riixin, Sacadka aad ka dhalatey ayaay Hawiye iyo Daaroodba isku haystaane iyaga meel saar oo u ab tiri! Kkkk
Waa sida aad sheegtey oo odaygan Kaahiye ah oo uu isagu abtirkiisa muranka ku jiro ayaa wuxuu doonayaa in uu qowmiyad ka fac weyn lugaha ku marto oo uu hoos geeyo, Hawiyaha uu isagu ku biiray ee aaysan dhammaadka la hayn ku biiristiisu!!! Kkk
Soow maadan arkin Markii Rooble la magacaabay, sida aay Dal iyo dibadba u dabbaadegtey beesha Ogaadeen?! Kkk
Tan Ajuuraanka haddii aan in yar ka iraahdo,Wallaahi way xanaaqayeen haddii aad Hawiye ku sheegto, Laakiin kuwooda Soomaaliya ku haray waxaay ka tirsan yihiin, D&M.
Halka Qabiilka Ajuuraan ee rasmiga ah oo dego Galbeedka Wajeer oo miyi iyo magaalaba leh aay ku hadlaan, Af shabbaha kan Oromada, Laakiin ka duwan oo aad u adag oo ah, Afka Rasmiga ah ee uu Ajuuraan lahaa!!
Marka, Ciyaalkan Hawiye ee doonayo in aay Daarood taariikh ahaan iyo tiro ahaanba isku dhereriyaan, ha Ogaadeena in uu Hawiye yahay, inta ku nool Afgeeye iyo Beraxleey dhexdooda oo aay weliba Daarood, Dir iyo Beesha Jareerba la deegaan. Wixii intaa ka baxsan ee Hawiye ahna aay yihiin, Dagoodiga wax ka dego NFD iyo gobolka Liibaan ee Itoobiya iyo xoogaa Karanle ah oo Oromada ka tirsan! Kkkk
War waxan odayga Gacan ku dhiiglaha ah ee Galaal ah, yuusan haadaan idinka ridin ha lagu yiraahdo! Kkk